Culture – Page 2 – The Ulwazi Programme
Ukubekwa kweSilo uMisuzulu kaZwelithini
Sekuphinde kwasa nakithi KwaZulu, laphuma lazidela ilanga lakhanyisa ubumnyama obebusisengethe thina kwalokoza nethemba lekusasa eliqhakazile. Isimbuliwe ingubo emnyama ebesiyembathile njengoba sesibekiwe iSilo njengoba besilahlekelwe ubaba wesizwe emuva kokudunguzela kwaso iSilo Samabandla, uNgangezwe lakhe. Sithe sisazilele ukubekwa kweSilo kwabe sekubekwa ibambela ngoba phela isizwe sikaPhunga noMageba besingeke sihlale singenamqaphi sibe umhlambi kazelusile. Esikhundleni sebambela bekubekwe uNdlunkulu … Read more
Categories Culture, History, People Tags Misuzulu kaBhekuzulu
Ukuhamba kweSilo (Umkhosi womhlanga)
Zife olwembiza izintombi zoMkhosi Womhlanga ngemuva kokukhothama kweSilo Samabandla, ebesizikhuthaza izintombi ngokuzigcina, ngokuzithiba ocansini. Akekho ongakhali ngokukhothama kweSilo, kepha okwezintombi zomhlanga ukukhala kuzwele kakhulu ngoba akekho ongazi ukuthi bazihamba phambili kuBayede njengoba bekunguye obehamba phambili ekuyaleni izintombu ukuthi zihloniphe imzimba, ukuzigqaja ngesiko, isintu kanye nokuhlala ngentombi. Bagqemeke engeqewi ntwala ingozi abaqapha bephinde behlole izintombi. Bakhala … Read more
Categories Culture, People Tags umkhosi womhlanga
Ziningi izinto umuntu akhule etshelwa ngazo. Lezi zinto zazishiwo abantu abadala ukusifundisa kabanzi ngempilo nangemvelo. Imfundiso engumkhombandlela wesimo isithile noma isimo okumele sisiqikelele. Lokhu kuphinde kube yindlela yokudlulisa ulwazi ngosikompilo lwesintu. Sikhule kunezinyoni obekuthi uma zibonakele noma zakhala kusho isimo sezulu esithile sezulu esizayo. Kulezi zinyoni ngingabala kuzo uthekwane, insingizi, ufukwe kanye nenkonjane. Uthekwane udume … Read more
Categories Culture, Environment Tags Ingududu, Inkonjane, Insingizi, Ufukwe, Usikompilo